धाउनैपर्छ र दिल्ली ? |The Peace Post
दिल्ली जाऊन् या बेइजिङ, बलियो विषयवस्तु नभए पनि जानैपर्छ भन्ने मानसिकता
कूटनीतिक दासता हो ।
नेपाली प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा अक्सर राजघाट पुग्छन् । गान्धी स्मारकमा माला अर्पन्छन् । लैजाँदा त कार्यकर्ता, सल्लाहकार, आफन्त र उपहार थुप्रै लिएर जान्छन् । तर फर्किंदा प्रतिफल कति ल्याउँछन् ? यो विमर्शकै विषय हो । किनभने कतिपय प्रधानमन्त्रीले सत्ता धान्ने दक्षिणी टेको बलियो बनाउनमात्रै २ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरी ९० जनाको लस्कर लिएर दिल्ली लम्किएको उदाहरण छ ।
मानौँ विषयवस्तुमाथि हाम्रो तयारी बलियै छ । तर हामी मात्रै दिल्ली धाउने कि दिल्लीबाट पनि आउने भन्ने प्रश्न उठ्छ । हाम्रा जुनै प्रधानमन्त्री भारत पुग्दा उताका समकक्षीलाई निम्तो दिएकै हुन्छन् ।‘हुन्छ, मिलाउँला’ नभनेका कसैले छैनन् । तर गएका २० वर्षमा नेपालको द्विपक्षीय भ्रमण एउटैले मात्र गरे । त्यो बेला पनि द्विपक्षीय वार्तामा नेपालको तयारी पुगेन भन्ने गुनासो थियो । त्यसैले तयारीबिना भ्रमणले मात्रै कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार्छु भन्नु भ्रम छर्नु हो । प्रधानमन्त्रीहरू सक्दो छिटो छिमेकीबाट ‘राजनीतिक अनुमोदन’ लिन खोज्छन् । दिल्ली र बेइजिङका तराजुमा आफ्नो ‘पोलिटिकल वेट’ जोखेर विपक्षीलाई देखाउने हतारो पनि हुँदो हो । यो रंगमञ्च हेर्दा यस्तो लाग्छ कि हामीले प्रधानमन्त्री हैन, राजदूत छानेका हौँ । उसको नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हुन अन्त कतैबाट ‘एग्रिमो’ आउनुपर्छ । र, नियुक्ति मिल्नासाथ कसैलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन दौडिहाल्नुपर्छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा १९ असार २०७४ मा प्रकाशित ।